Musharaxiinta oo qaar ka mid ah madaxda ururada caalamiga ah iyo wasiiro arrimo dibadeedyada u diray qoraal. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Musharaxiinta oo qaar ka mid ah madaxda ururada caalamiga ah iyo wasiiro...
Musharaxiinta oo qaar ka mid ah madaxda ururada caalamiga ah iyo wasiiro arrimo dibadeedyada u diray qoraal.
Golaha Midowga Musharaxiinta Soomaaliya ayaa qoraal ay ku sheegeen “inay kula socod siinayaan xaaladda adag ee is-mari waaga siyaasadeed ee halista ku ah qarannimada Soomaaliya” u diray qaar ka mid ah madaxda ururada caalamiga ah iyo wasiiro arrimo dibadeedyada dhowr dal.
Qoraalkan ayey 15-ka musharax ee golahan u direen Xoghayaha arrimaha dibedda Mareykanka Antony J. Blinken, Wakiilada sare ee Midowga Yurub ee siyaasadda arrimaha dibedda iyo amniga Josep Borrell, xoghayaha arrimada dibedda Britain Dominic Raab, Wasiirka arrimaha dibedda Turkey Mevlüt Çavuşoğlu, guddoomiyaha Midowga Afrika Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Xoghayaha ururka iskaashiga dalalka Islaamka Dr. Yousef Bin Ahmad Bin Abdul Rahman Al-Othaimeen iyo xoghayaha guud ee Jaamacadda Carabta Ahmed Aboul-Gheit.
Golaha Midowga Musharaxiinta ayaa qoraalkooda ku sheegay, in xubnaha ay u direen ay doonayaan inay gacan ka gaystaan, in si deg deg ah loo fuliyo hanaan doorasho oo xaqiijinaya doorashooyin baarlaman iyo mid madaxweyne.
“Tan iyo markii uu dhammaaday muddo xileeka xafiiska ee madaxweynihii hore ee Farmaajo, 7-dii Febraayo, Soomaaliya ma lahyen dowlad sharci ah oo dastuur ku dhisan,” ayaa lagu yiri qoraalka.
Waxa ay sheegeen “in doodda ku dhisan danta shakhsi ee madaxweynihii hore ee ah inuu xafiiska sii joogayo inta laga doorto cid beddesha ay tahay mid aan sax aheyn, sababtoo ah isagaa ay ah sababta ugu weyn ee dib u dhigtay hanaankii doorasho.”
Golaha Midowga Musharaxiinta waxay sheegeen inay tahay wax laga xumaado in Farmaajo iyo xulafdiisa maamulka ay weli diidan yihiin inay awoodda wareejiyaan, islamarkaana saamileyda kala shaqeeyaan fududeynta doorasho xor iyo xalala ah, sida qoraalka loo dhigay.
Waxay intaas ku dareen inay rumeysan yihiin in Farmaajo uusan si iskiis ah talada u wareejin doonin, islamarkaana “uu si wadi doono inuu arbusho dadaallada lagu fulinayo hanaan doorasho oo dimoqraadi ah.”
Waxa ku eedeeyeen Farmaajo in ficalladiisa ay helis gelinayaan xasiloonida Soomaaliya, islmarkaana uu weli diidan yahay inuu si daacad ah ula xaajoodo madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya, sida qoraalka loo dhigay
Waxa kale oo ay sheegeen in xoriyadda hadalka caburin lagu hayo islamarkaana uu Farmaajo diiday dibad-bax nabdoon oo lagu damaanad qaaday dastuurka dalka, ayada oo loo adeegsanayo ciidamada militariga.
Midowga Musharaxiinta ayaa sidoo kale ururada iyo dalalka qoraalka loo diray ku wargeliyey in ciidamada ay maal-geliyeen ee Soomaaliya laga soo weeciyey dagaalkii Al-Shabaab, loona adeegsanayo caburinta dibad-baxayaal nabadeed.
Ciidamada ay xuseen waxaa ka mid ah Gorgor iyo Haramcad, oo Turkish-ka ay tababareen iyo Waran oo ay tababareen Mareykanka.
Qoraalka ayey ugu dambeyn Golaha Midowga Musharaxiinta ku dalbadeen:
1 – In Farmaajo uu mas’uuliyadda amniga iyo arrmiha doorashada ku wareejiyo ra’iisul wasaaraha.
2 – Inuu xilalka ka qaado taliyayaasha ciidamada ee ku lugta leh weerarka shacab si nabdoon u dibad-baxayey iyo hoggaamiyayaasha mucaaradka, uuna ka joojiyo ciidamada inay siyaasad ku lug yeeshaan.
3 – Inuu ballaariyo saaxada siyaasadda, sidaas darteedna kulamada, dibad-baxyada iyo dhaq-dhaqaaqyada kale ee nabadeed la qaban karo ayada oo wax xanibaad ah aysan saarin dowladda.
Madaxtooyada Soomaaliya si deg deg ah ugama aysan jawaabin qoraalkan.
Previous articleAftida Switzerland: Dadka oo u codeeyay inaan indha-shareer la xiran
Next articleCiidanka booliska Soomaaliya oo soo xir xiray dhalinyaro isku abaabushay koox koox..
Mamulka Puntland oo sheegtay in shirka uu Farmaajo ku baaqay aysan...
Khudbaddii uu xalay jeediyay madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa siyaabo kala duwan uga falceliyay mucaaradka iyo qaar kamid ah maamul goboleedyada dalka. Wasiirka Warfaafinta ee Puntland...
Taliye Xijaar taliye ku-xigeenka iyo afhayeenka ciidanka booliiska oo hoygiisa...
Qoorqoor iyo Guudlaawe oo ka baxay Gacanta Farmaajo
Foosiya Xaaji Aadam oo si rasmi ah ugu dhawaaqday iney...
Farmaao oi la sheegay wadooyinka Sabab la yaableh u xiray...
Shirkadda Facebook oo ku dhowaaqday in Donald Trump ka mamnuucday...
Mohamed Abdullahi Mohamed - June 5, 2021 0